Mpampivelona eto Madagasikara Mbola tena tsy ampy isa
Mbola tena tsy ampy ny mpampivelona eto amintsika. Mpampivelona iray mantsy miandraikitra vehivavy 50.000 raha tokony ho 5.000 isa izany. Eo an-danin�izay anefa dia tsy manana mpampivelona afa-tsy 3.000 isika eto Madagasikara.
Anisan’ny antony mbola mampahazo vahana ireo reny mitondra vohoka maty eo am-piterahana io. Toy izany koa ireo zaza menavava marobe mamoy ny ainy tsy fidiny. Ireo olona sahirana ara-pivelomana matetika no tena mahita faisana, indrindra fa ireo miteraka eny anivon’ny hopitalim-panjakana. Saika hiharan’ny fanilikilihana hatrany mantsy izy ireny, indrindra fa ireo tsy manan-katoraka mihitsy, hany ka miafara amin’ny famoizany ny ainy. Miantso ny hiarovana hatrany ny ain’ny reny sy ny zaza araka izany ny UNFPA. Nankalazaina omaly ny andro iraisam-pirenena ho an’ny mpampivelona. Lohahevitra nampitondraina ny hetsika ny hoe : “Mandritra ny fiainan’ny reny sy ny fianakaviana, eo anilany foana ny rasazy”.